Ny fahasoavan'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse manerantany
Ny fahasoavana no teny voalohany amin'ny anarantsika satria manoritsoritra indrindra ny fizahan-tenanay manokana sy mizara an'Andriamanitra mankany amin'i Jesosy Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. "Fa kosa, mino isika fa amin'ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no hamonjena antsika, tahaka ny ataon'izy ireo" (Asan’ny Apostoly 15, 11). Isika dia "tsy mendrika ny fahamarinana avy amin'ny fahasoavany amin'ny fanavotana amin'ny alalan'i Kristy Jesosy" (Romana 3:24). Amin'ny fahasoavana irery no mamela antsika (amin'ny alàlan'i Kristy) mizara ny fahamarinany manokana. Mampianatra antsika tsy tapaka ny Baiboly fa ny hafatra momba ny finoana dia hafatra momba ny fahasoavan'Andriamanitra (Asan’ny Apostoly 14,3; 20,24; 20,32).
Ny fototry ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona dia fahasoavana sy fahamarinana foana. Raha ny lalàna no fanehoana ireo soatoavina ireo, ny fahasoavan'Andriamanitra dia nahita fanehoana feno amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy. Amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany no hamonjena antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa tsy amin'ny fitandremana ny lalàna. Ny lalàna izay hanamelohana ny olona rehetra dia tsy teny farany nataon'Andriamanitra ho antsika. I Jesosy no teny farany ho antsika. Io no fanambarana tonga lafatra sy manokana momba ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahamarinana nomeny an-kalalahana tamin'ny zanak'olombelona.
Ny faharesen-dahatra antsika eo ambanin'ny lalàna dia voamarina sy marina. Tsy mahazo fitondran-tena tiantsika isika satria tsy gadra ny lalàny sy ny ara-dalàna Andriamanitra. Andriamanitra ao anatintsika dia miasa amin'ny fahalalahana masina araka ny sitrapony. Ny sitrapony no faritana amin'ny fahasoavana sy ny fanavotana. Nanoratra izao manaraka izao ny apostoly Paoly: «Tsy ny fahasoavan'Andriamanitra no manary ahy; satria raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana, dia maty foana Kristy ” (Galatiana 2:21). I Paoly dia manoritsoritra ny fahasoavan'Andriamanitra ho toy ny hany safidy tsy tiany hesorina. Ny fahasoavana dia tsy zavatra lanja ary azo refesina. Ny fahasoavana dia fahasoavan'Andriamanitra velona izay hanenjehany ny fon'ny olona sy ny sainy ary samy miova izy roa. Ao amin'ny taratasiny ho an'ny fiangonana any Roma, i Paul dia nanoratra fa ny hany zavatra iheverantsika azy amin'ny ezaka ataontsika dia ny fandoavana ny ota, izany hoe ny fahafatesana, izany no ratsy. Fa misy ihany koa ny tsara indrindra, satria "ny fanomezan'Andriamanitra dia fiainana mandrakizay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika" (Romana 6:24). Jesosy dia fahasoavan'Andriamanitra. Fanavotana an’Andriamanitra izay navotsotra ho an’ny olona rehetra.